कहाँबाट थाल्ने कृषिमा सुधार ? कसरी टिकाउने किसानलाई ?
अन्तर्वार्ता/विचार शुक्रबार, वैशाख १९, २०७७
खेती कर्मबाट खान नपुगेपछि धेरै किसान पलायन भएर शहरदेखि वैदेशिक रोजगारीसम्म पुगेका छन्। अहिले तिनै युवालाई फर्काएर बाँझो जमीन फोर्न लगाउने बहस आकर्षक सुनिए पनि हाम्रो सबै संरचना र खेती प्रविधि यथावत् नै राखेसम्म कृषिमा सुधारको कुरा कोरा गफ मात्रै हो।
नेपालको आफ्नै विशेषतायुक्त र जीवन संस्कृति बनेको कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिकका नाममा व्यापारिक बनाइनु र किसानलाई उपेक्षा गरेर बिचौलियालाई पोसिनु नै यो धराशायी हुनुकाे कारण हो।
(रमेश कुमारसँगको कुराकानीमा आधारित)